CPA vs MBA: Which is Better For Your Career & MUSHAHARKA? [2018 update]
CPA vs MBA: Taas oo ka mid ah waa ka wanaagsan Waayo, Career & MUSHAHARKA?
23 Aug CPA vs MBA: Taas oo ka mid ah waa ka wanaagsan Waayo, Career & MUSHAHARKA?
ardayda College inta badan ka heli naftooda qasan marka la go'aaminayo u dhexeeya socday ay liisanka CPA ama ay helaan shahaado MBA ah. Furaha helo doorasho sax ah waa iyada oo loo marayo qiimaynta gool xirfadaada iyo shaqsi door bidayso. Halkii kor u eegay dadka kale wixii talo ah, waxaa quman in aad qaadato waqtiga iyo fekero qorshaha mustaqbalka. Si lagaaga caawiyo in aad go'aan ka, bal aynu eegno waxyaabaha aasaasiga ah ee kasta si aad u nasato karaa oo kaliya qabaa ku saabsan fursadaha mustaqbalka.
Waa maxay MBA ah?
CPA vs MBA: Jidka Career
CPA vs MBA: mushaaraadka
CPA vs MBA: Kharashka Certification
CPA vs MBA: Shuruudaha Time
Sidaas, Taas oo ka mid ah waa ka wanaagsan in aad loogu talagalay?
A Certified Public Accounting (CPA) waa aqoonsi dhaqaale abaal by Machadka American ee Certified Public xisaabaadka (AICPA). shahaado Tan waxaa loo aqoonsan yahay calaamad guul weyn in industry Maliyada. Haddii aad doonayso inaad noqon CPA ah, waa inaad ku gudubto imtixaanka in la fuliyaa by AICPA ah. Imtixaanka CPA ayaa si fiican isku diyaarinaya aad ah fikradahii qumanaa xisaabinta iyo imtixaamaa fahamkaaga iyo awooda in aad dalbato this barashada duurka of hanti dhawrka iyo xisaabaadka. CPA A waxaa loo arkaa inay khabiir ku ah su'aalaha sharciga canshuurta ama bixinta talo canshuurta dadka. Waxaad heli doontaa doorasho furan fursado shaqo ee shirkad yar ama weyn ama xataa naftaada.
Master A Maamulka Business waa caadi Dabcan degree laba sano ah oo ay bixiyaan kuliyadaha ganacsiga si ay kuu diyaariyaan berrinkii ganacsi. MBA waa daraasad guud gelin doorka maamulka oo dhan iyo waa ku haboon haddii aad dooneyso in aad qoraysaan Misbaax oo duurka ku ah maamulka, gaar ahaan suuq-. Ardayda u furan yihiin raad Dabcan heerka uu marayo waqti qayb-iyo nidaamka waxbarashada fog ku xidhan aaggooda fiirsashada gaar ah iyo muhiimadda in industry ee. The different areas of specialization that you can achieve under the umbrella of an MBA program are accounting, maaliyadda, marketing, khayraadka aadanaha, iyo hawlaha (ee la xiriirta la falanqayn maamulka iyo istaraatijiyad). Barnaamijku wuxuu waxbarasho ee MBA waa kuma koobna maaliyadda iyo ku lug leedahay maadooyinka sida dhaqaalaha, marketing, dhaqanka urur iyo falanqaynta taranta.
Sida CPA ah, horyaal shaqo aad ka mid noqon kara: Around The, hubiyaha, Lataliyaha canshuurta ama xisaabiye foreensiga. Tan iyo meelaha waxbarasho MBA ah u badan yihiin kala duwan, waxaa jira doorashooyin ka badan mustaqbalkiisa. Haddii aad haysato laysanka CPA ah, fursadaha aad la diiradda doonaa in xisaabaadka iyo maaliyadda. Haddii labada iyaga ka mid ah oo aad ka heli, aad leedahay doonaa dunida oo dhan ee aad qubo.
Haddii aad qabto MBA ah, aad u leedahay inaad doorato weyn ee fursadaha mustaqbalkiisa, depending on your area of specialization. Haddii aad qabto MBA ah, aad shaqayn karaan sidii la taliyaha maamulka a, Tababaraha marketing, banker maalgashi, Sarkaalka macluumaadka sare, maamulaha howlaha ama lataliyaha dhaqaaleyahanka ah.
Waa wax qarsoodi ah oo weyn in isagoo ah MBA ama CPA furi kara albaabada ka badan mustaqbalkiisa iyo in la kordhiyo ku muteystay ka iman kara. Sano oo khibrad ah iyo meesha aad ka shaqeysid saameyn qaar ka mid ah waxay yeelan doonaan. Haddii aad tahay CPA ah inaad heli doonto ku dhowaad 10% ka badan dhigooda non-CPA. Mushaharka dhexdhexaadka for CPA ah waa $62,123 sanadkiiba. Dhanka kale, goob kaalin weyn in magdhow MBA ah - taasoo la micno ah in dugsiga aad ka qayb (ku salaysan darajayn qaranka) saameyn ku yeelan kara inta aad ka dhigi. Si kastaba ha ahaatee, sanadka ugu horeeya ka dib markii aad MBA, waxaad filan kartaa in ay helaan dalab shaqo celcelis ahaan ee $50,427. Inkasta oo laga yaabo in ay u muuqdaan kuwo baacsadaan, maskaxda ku hay in aad arki doonaa dakhligaaga koror ku iman kara si weyn sida aad u khibrad shaqo. On celceliska, haddii aad leedahay MBA ah, waxaad filan kartaa gudida more galay Robben iyo horumarinta dadka dhiggooda ah adiga oo aan aqoonsiga this.
Way adag tahay in ay ku riday tag qiimaha a on noqdo CPA ah. Waxbarashada dugsiga halkaas oo aad ka heli degree undergraduate aad qayb ka mid ah isla'egta waxay noqon doontaa. On top of in, waxaad yeelan doontaa kharashka la xidhiidha koorsooyinka udiyaarin kasta oo aad qaadan laga yaabaa in ay u diyaar garoobaan imtixaanka CPA ah. Waxaad u fahmi karaa taasi ku kici doonaa oo ku saabsan $2,000. Ku saabsan imtixaanka laftiisa, kharashka si weyn u bedela, gobol ka gobol. Gobolada qaarkood waxay leeyihiin lacagta diiwaangelinta ah in waa la dumiyey by qaybta sida badan(s) imtixaanka aad qorsheyneysid inaad for fadhiisan. Waxaa jira lacag dheeraad ah ugu qoraa. (Waxaad u baahan doontaa si aad u hubiso guddida gobolka aad ka soo xisaabaad.) celcelis, waxaa kici doona oo ku saabsan $1,500 si uu fadhiisan waayo dhan afar qaybood. Ugu dambeyntii, waxaa jira kharashka liisanka laftiisa, taasoo celceliska ah oo ku saabsan $150. Ha illoobin in si ay u ilaaliyaan liisankaaga, Waxaa lagaaga baahan doonaa inaad timaaddo koorsooyinka CPE si joogto ah oo aad la kulmeyso doonaa kharashka dheeraadka ah. gobolada qaarkood, sida Connecticut, u baahan 40 saacadood ee CPE sannad kasta. Taasi laga yaabaa inay sida ugu badan ee $4,000 in sii waxbarashada sannad kasta. Kharashka ku muteystay MBA ah waa mid aad u variable oo ku xiran arrimo sida: goobta, gaar ah oo ay kasoo horjeeddo tacliinta sare ee dadweynaha, tirada saacadaha loo baahan yahay, iwm. Jaantuska in kharashyada kale sida buugaagta iyo / ama helitaanka qalabka online, kharashka technology, bartaan koorsooyinka iyo haddii aad qorsheyneysid inaad ku noolaato on-campus, qiimaha qolka iyo. qiimaha celcelis ahaan waxbarashada ku wareegsan yahay $58,000. Wax kale, waa dakhli iyo khibrad shaqo oo aad iska cafisaan yaa doonaa haddii aad doorato in ay noqdaan arday waqti-buuxa ah. Taasi waa sababta waqti-dhiman, online iyo, barnaamijyada dardargalinta MBA ayaa noqday sidaas oo caan ah.
Noqoshada CPA ah waxay qaadataa waqti dheer waxaa ka badan ayaa ku lug leh. Waa in aad ayaa dhameystirtay 150 saacadood credit undergraduate iyo qaar ka mid ah dalalka looga baahan yahay waa in aad sidoo kale waxay leeyihiin tiro la siin saacadaha la shaqeeyay iyada oo ay kormeerayaan si toos ah CPA ah. Waxaad sidoo kale yeelan doontaa 18 bilood in uu fadhiisan waayo, oo dhex mari oo dhan afar qeybo ka mid ah imtixaanka CPA ah. Wadar ahaan waxa uu dhici karaa oo ku saabsan 8 1/2 sano inuu noqdo CPA ah (e.g. shan sano oo shaqo undergraduate, labadii sano ee shaqada iyo 18 bilood in ay gudbaan imtixaanka CPA ah.) Ma jiro waqti go'an oo gaar u ah dhamaystirka barnaamijka shahaadada MBA. Mudo intee leeg ayay qaadataa waxay ku xirnaan doontaa haddii aad wax ka barato buuxa ama qayb ka mid waqti iyo haddii aad tagto fasalo on campus ama iyaga online qaado. Dugsiyada qaarkood waxay sidoo kale ku siin credit waayo-aragnimo shaqo oo garaacayaa karaa qaar ka mid ah saacadaha looga baahan yahay dhamaystirka degree. Tan iyo markii barnaamijka MBA ah waa barnaamij shahaadada Masterka ee, waxaa jira nooc ma imtixaanka shahaadada in loo baahan doonaa in aad ku dul dhamaystirka noqotay. Waxaad si fudud u qalin jabiyaan ka barnaamijkaaga. celcelis, waxa ay qaadataa 2-3 sano si uu u dhameystiro barnaamijka MBA ah.
Haddii aad xiisaynayso in fursado maamulka ama la talinta ganacsiga guud, markaas MBA noqon lahayd doorasho fiican. Dhanka kale, haddii aad si adag u ah "tirooyinka cruncher,"Waa in aad noqoto CPA ah, gaar ahaan haddii aad rabto in aad u shaqeyso shirkadda afar xisaabaadka weyn. Haddii aad tahay CPA ah oo raba in ay helaan faham wanaagsan ee hawlaha ganacsiga oo ay noqoto shaqada ee warshadaha more, helitaanka MBA noqon lahaa mid waxtar leh. Sidoo kale, haddii aad MBA ah ku urursan yihiin in maaliyadda ayna qorshaynayaan in ay ku takhasusaan maaliyadda shirkadaha ama canshuuraha, waxa macno kaamil ah si ay u tagaan oo ku saabsan in noqon CPA ah. Waxaa jira xal u lahayn in ay MBA ah oo ay kasoo horjeeddo Doolaal oo CPA. Haddaba waxaa jira jidh dhameystiran cilmi in lagu qeexo faa'iidada iyo khasaaraha qabo hal ama ka kale ama labadaba. Network oo la hadal dadka qaba MBA ah, CPA ama labadaba oo bal arag waxa talo ay bixiyaan. in aad go'aan ka gaarto waxa adiga kuu wanaagsan, iyo inuu tixgeliyo danahaaga, xirfadaha, dhaqaalaha iyo ujeeddooyinka mustaqbalkiisa.
CPA, Roger CPA Review, dhimista Exclusive, dhimista Deep 41 isticmaalaa maanta
Last isticmaalay 14 minutes ago
CPA, Wiley CPAexcel, dhimista Exclusive 40 isticmaalaa maanta
Last isticmaalay 18 minutes ago
CPA, Surgent CPA Review, dhimista Exclusive 40 isticmaalaa maanta
Last isticmaalay 17 minutes ago
CPA, Wiley CPAexcel, Ugu deeq u Gaarka ah 36 isticmaalaa maanta
Last isticmaalay 21 minutes ago
Last isticmaalay 23 seconds ago
Last isticmaalay 22 seconds ago
CPA, dhimista Exclusive, Fast Forward Academy 41 isticmaalaa maanta
CPA 39 isticmaalaa maanta
CPA, Ugu deeq u Gaarka ah, Burburin CPA The 37 isticmaalaa maanta
CPA, Roger CPA Review, dhimista Deep 34 isticmaalaa maanta
CPA, Roger CPA Review, dhimista Deep 41 isticmaalaa maanta
Last isticmaalay 9 minutes ago
Last isticmaalay 7 minutes ago
CPA, Yaeger CPA Review, dhimista Exclusive 39 isticmaalaa maanta
CPA, Gryfina, dhimista Exclusive 37 isticmaalaa maanta
Last isticmaalay 8 minutes ago
CPA, Gleim CPA Review, dhimista Exclusive 41 isticmaalaa maanta
Last isticmaalay 3 minutes ago
CPA, Surgent CPA Review, lagacna 33 isticmaalaa maanta
CPA, Roger CPA Review, U bandhigidda maalgelinta 34 isticmaalaa maanta
CPA, Surgent CPA Review, U bandhigidda maalgelinta 40 isticmaalaa maanta
Last isticmaalay 42 seconds ago
CPA, Surgent CPA Review, Trial Free 38 isticmaalaa maanta
CPA, Roger CPA Review, kale 41 isticmaalaa maanta
CPA, Wiley CPAexcel, kale 40 isticmaalaa maanta
CPA, Wiley CPAexcel, dhimista Exclusive 34 isticmaalaa maanta